Mpanaparitaka rano tsy misy rano → dispensers rano kosmetika any Polonina
Mila anao water dispenser amin'ny orinasa, birao? Water Point ho solontena tokana Cosmetal any Polonina no manolotra ireo mpamaky rano anaty tavoahangy ho an'ny trano fisakafoanana, trano fandraisam-bahiny, birao, anjara fanompoana, klinika sy hopitaly, sekoly, valan-javaboary sy trano fanatanjahan-tena, salons Fitness ary domu.
Cosmetal ankehitriny no mpamokatra italiana lehibe indrindra sy mpitarika iraisam-pirenena amin'ny famokarana vahaolana fiovana vaovao amin'ny fisotroan-drano.
Ny famokarana vata fampangatsiahana, na ao anaty tavoahangy na amin'ny rano, dia vita 100% vita any Italia.
Ny kosmetal dia mirehareha ny iray amin'ireo tolotra mivelatra be indrindra amin'ny indostria, amin'ny lafiny momba ireo karazana vokatra natolotra rano - ny mari-pana, ny hatsiaka, ny hafanana, ny tselatra ary koa ny modely isan-karazany misy.
Ny fanoloran-tena iraisam-pirenena, miaraka amin'ny kalitaon'ny vokatra vokariny, dia namela ity orinasa artisanal ity hahatratra ambaratonga fahombiazana ary ho lasa mpamatsy ny sasany amin'ireo vondron-trano fividianana manan-danja indrindra, na any Italia na eran'izao tontolo izao, izay namboarina ireo endrika famoronana.
Fanaterana rano tsy misy alika-Class
Hi-Class dia mpitaona rano ambony indrindra any amin'ny kilasyy, natao sy natao ho an'ny rindranasa sy Atitany rehetra. Mampiasa ny vahaolana teknika farany farany sy ny fitaovana tsara indrindra izay manome antoka ny fahombiazana sy ny fahatokisana ambony indrindra, ahafahanao mahatratra hatramin'ny 45 l / h ny hatsiaka sy ny rano mamirapiratra ary ny 13 l / h ny rano mafana.
Manisy karazana rano efatra izy io: mari-pana, ny hatsiaka, ny tselatra ary ny hafanana, izay azo ariana ao anaty vata misy ny habakabaka isan-karazany noho ny spout azo havaozina. Modern endrika; eo anoloana vita amin'ny fitaratra fitaratra mainty mitambatra amin'ny vy stainless sy menaka fanaraha-maso aesthetic no mamorona vokatra miaraka amin'ny sanda fampiasana avo be.
Pro-Stream censeur cylinder maimaimpoana rano. Rano mangatsiaka, mafana sy mandsi
PRO-STREAM dia mpidina iray miaraka amin'ny famolavolana maoderina sy haitao miaraka amin'ny tsanganana amin'ny thermally insulated, panel touch control, fampahafantarana mazava momba ny toe-javatra fampiasa amin'ny fitaovana, anisan'izany ny fiasa: vonona, ny hafanana, tsy tapaka. Miasa amin'ny variants misy boiler, vata fampangatsiahana ary rafitra gassing.
Ny rafitra koa dia manana rafitra saro-pady izay mifehy ny fomba fandidiana ny fitaovana, mampihena ho an'ny fanjifana angovo. Mametraka rano mafana amin'ny hafanana 98 ° C izy io manomboka eo am-pandehanana, satria afaka mameno hatramin'ny 215 kaopy isaky ny adiny misy 250 ml, ary koa ny safidy ny hatsiaka sy ny rano mamelatra hatramin'ny 15 l / h. Azo ampiasaina amin'ny fanaovana kafe, kafe sy zava-pisotro mafana hafa amin'ny fomba haingana sy azo ampiharina.
Dispenser amin'ny rano
Fitiavana - dispenser rano tsy misy rano: mahomby, hentitra, miaraka amina endrika maoderina, vita amin'ny fitaovana tsara indrindra hiantohana ny fandidiana azo antoka sy mateza. Ny vahaolana ara-teknika sy teknolojika azo ampiharina dia miantoka ny fandidiana mora sy azo antoka, izay misy fiantraikany lehibe amin'ny vidin'ny fandidiana amin'ny fanalefahana ny fanjifana angovo.
Ny rano mangatsiaka tsara indrindra amin'ny rano fisolokiana dia manome rano mangatsiaka 22 l / h misy rano mifangaro sy ampy ho an'ny olona 40.
Mampiasa ny teknolojia ICE Bank amin'ity rano mangatsiaka ity, izay mifandray mivantana amin'ny famatsian-drano.
Tsy misy ny fitahirizam-panamboarana namboarina, izay manome fiarovana avo kokoa momba ny fahadiovana satria tsy voatahiry ny rano amin'ny faran'ny herinandro sy ny fialantsasatra.
Ny rano mangatsiaka no mitahiry ny toerana fitahirizana. Famolavolana mahafinaritra mba hifanaraka amin'ny tontolo iainana.
Ny fanatanjahantena dia manana fisokafan-tsivana lehibe izay ahafahanao mameno kitapo sy tavoahangy.
Lavorary toy ny rafitry ny rano ao an-trano na toa ny rano mangatsiaka kokoa amin'ny birao
Mihazona kaopy miharo (7 kaopy)
Tsy misy ny fitahirizan-drano / Fahatsiarovana mivantana
Famatsian-drano tsy tapaka
Fantsary azo ampiasaina
Toeram-pidiovana madio sy mora simba
Mangatsiaka kokoa ny rano mangatsiaka
Misy dikan-teny: rano ny mari-pana, mangatsiaka, mafana, tselatra.
J-Class censera maimaimpoana rano
J-Class dispensers rano dia mifanentana amin'ny kalitao avo indrindra sy ny teknolojia tena tsara, izay mahatonga azy ireo ho fitaovana azo itokisana eo an-tanan'ny mpampiasa, noho ny fahaizana azy, ampiasaina amin'ny birao, trano bara, trano fisakafoanana kely ary trano.
Manaraka karazany roa izy ireo: TOP amin'ny counter sy IN eo ambanin'ny counter, manafatra karazana rano efatra: ny mari-pana, ny rano mangatsiaka, ny rano mafana amin'ny 98 ° C sy ny karbonina, miaraka amin'ny rano roa 30 l / h ary 45 l / h.
Ny dispenser rano maimaimpoana any Niagara Top
Niagara Falls - dispensers rano avy amin'ity fianakaviana ity dia fitaovana matihanina azo antoka sy azo itokisana izay manolo ny rano tavoahangy, manamora ny fandidiana, manafoana ny filana fanaraha-maso sy fitehirizana, manisy fotoana ary manamora ny lozika, ary manolotra ireo fenitra avo indrindra sy fahombiazana.
Noho izany, natao ho an'ny rindranasa be dia be izy ireo, manome antoka ny fandidiana tsy misy olana rehefa mizara rano be karbonika sy tsy misy karbonika, mamela anao hameno saika haingana daholo ny karazan-tsambo sy hampihenana ny vidiny. Misy modely telo: countertop ambony, IN eo ambanin'ny counter-freestanding.
DRINK TOWER dispenser rano tsy misy rano
Tonga lafatra amin'ny famoahana rano mangatsiaka be dia be sy manjelanjelatra. Mifanaraka tanteraka amin'ny sehatry ny katsentsitra io: any anaty trano fisakafoanana, trano fisakafoanana, hotely ary trano fisakafoanana. Ny dispenser dia azo ampifandraisina amin'ny rafitra misy eo ambanin'ny counter-counter mba hanomezana fepetra takiana. Ny fampiasana tsotra fotsiny sy ny fisafidianana ny fitaovana avo lenta dia miantoka ny fahadiovana farany ary miaraka amin'izany dia mampihena ny filàna fikojakojana tsy mahazatra.
Ny rano H2O maimaim-poana cylinder
H2O isika dia mpanadin-drano miaraka amin'ny refy mivalona, ​​famolavolana maoderina, fandidiana tsotra ary intuitive, loharano tsara ahitan'ny rano matsiro amin'ny mari-pana, ny hatsiaka, ny varatra sy ny mafana.
Tonga amin'ny andiany roa: Tontolon'ny fitrandrahana ambony sy IN ao anatin'ny countertop miaraka amin'ny spout
Ny dispenser rano maimaimpoana G ZERO
Kreta vita amin'ny Chrome miaraka amin'ny fonony vy matevina mainty na borosy.
Ny dispenser rano maimaim-poana ny Acqua Alma Point - Fitsapana vaovao nomerika mampihetsi-po vaovao hiarovana ny planeta eto amintsika
Acqua Alma Point dia dispenser mahay izay afaka mamorona karazana rano, mamofona azy hamorona zava-pisotro fanao mahazatra, fa ny tena mavitrika dia mifandraika amin'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny Acqua Alma Refill APP ary tavoahangy iray manan-tsaina miaraka amin'ny tag NFC. Noho ny fampiharana, ny mpampiasa dia afaka mitantana profil, ny tiana, ny fomba fanao, ny fanamarinana hatrany, ny fizotran'ny fitrandrahana ary hahita ny teboka Acqua Alma akaiky indrindra. Na dia fisaorana aza ny NFC, ny tavoahangy dia mifandray amin'ny mombamomba ny mpampiasa sy eken'ny milina, mampatsiahy ireo tiana na ny fampiroboroboana natsangana tao amin'ny mombamomba.
5 / 5 ( 64 vato )
Acqua Almà Pointcensinder maimaimpoana ranocensinder maimaimpoana ranotavoahangin-drano ho an'ny dispenserdispenser rano an-tranofamatsian-drano ho an'ny biraofamatsiana rano ny lohataona ho an'ny tranompanome rano amin'ny orinasafizarana rano ho an'ny orinasafizarana rano mineralywater dispenserdispenser rano ho an'ny ankizydispenser ho an'ny rano manidinamacro dispenser ranoWarsaw dispenser ranorano mafanawater dispenserwater dispenser5l water dispensertsy fahita anaty ranocylinder rano dispenservidin'ny dispenser ranodispenser rano fanomezana voajanaharydispenser rano ho an'ny ankizydispenser rano ho an'ny biraodispenser rano an-tranovidin'ny dispenser rano an-tranofamerenana ny rano any an-tranodispenser rano ho an'ny orinasafisotro rano fisotroeden water dispenserdispenser rano misy karbonikadispenser rano misy karbonika ho an'ny tranoeden manaparitaka ranowater dispenser ny fomba fiasananydispenser rano mineralydispenser rano ho an'ny tavoahangyfisotro rano fisotrodispenser rano ao anaty vata fampangatsiahanadispenser rano ao anaty vata fampangatsiahana ny fiasan'ioWarsaw dispenser ranotrano fandraisam-bahinyvidin'ny fanofa-bidy amin'ny ranoco2 water dispensertapitra dispenser ranodispenser rano miaraka amin'ny vata fampangatsiahanarano mangatsiakadispenser rano ho an'ny orinasa sy biraony fandefasana ranony fitsinjarana rano ho an'ny orinasarano ho an'ny biraodispensers rano ny tranoeden water dispensersny tselatra maimaimpoanafisotroana rano fisotrodispensers ny lohataonany fandefasana ranoRantsankazo irayloharano misotro ranoRivotra fampangatsiahana ranoWaterpointrano ho an'ny biraorano ho an'ny biraorano ho an'ny lisitry ny vidin'ny biraodispenser rano an-tranony fandefasana ranompaninjara rano mineralrano ao amin'ny dispensers ho an'ny orinasarano avy ao amin'ny dispenserrano avy amina mpaninjara ho an'ny orinasarano avy amin'ny dispenser mankany an-tranorano avy amin'ny hevitra momba ny dispenserrano misy dispenserloharano lohataona miaraka amin'ny fanaterana trano